Te-Hampiroborobo ny Nasionalisma Amin’ny Alalan’ny Tantara Mitohy Antsoina hoe “Love Missions ” Ny Fitondrana Miaramila ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Marsa 2018 18:59 GMT
Ireo solontenan'ny RAFC naka sary niaraka tamin'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika nandritra ny fihaonambe (avy amin'ny Fanpage Facebook: Royal Thai Air Force News)
Navoakan'i Kittinun Klongyai avy amin'i Prachatai ity lahatsoratra ity, tranonkalam-baovao iray tsy miankina ao Thailandy, ary ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices indray ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tamin'ny volana jona lasa teo,nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny fantsona fahitalavitra Channel Seven — nahitana mpikambana maro ao amin'ny tafika — manambara fisiana andian-tantara vaovao miresaka miaramila mitondra ny lohateny hoe “Love Missions”. Marihan'ity fotoana ity ny fidirana an-tsehatra miharihary ataon'ny tafika amin'ny resaka tantara mitohy, na Iakorn, efa sehatr'asa iray.
Ny Kapiteny Wanchana Sawasdee, solontenan'ny miaramila, nanamarika hoe:
Mahatsapa izahay fa manohana ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana ny firenena ny tantara.
Fa hatraiza ny fahazakan'ny mpijery ny nofinofy, raha mihamatroka isan'andro ny tena zava-misin'ny fitondrana jadona?
Tantara Tsangana Atao Fitaovana Politika
Efa ela ny tany Thailandy no nampiasain'ny fitondrana ara-miaramila ny Iakorns hampidirana amin'ny mpijery fahatsapana nasionalisma sy fihetseham-po miabo manoloana ny miaramila. Vitsy ny fandaharana mivoaka amin'ny fahitalavitra tsy miraharaha tantara mitohy fa mieli-patrana ny ambaindain'ny lakorns, ahitana ireo mpiantsehatra lehilahy (bôgôsy) tsara tarehy antsoina matetika hoe “vadim-pirenena” ao amin'ny media sosialy.
Nanazava i Chanan Yodhong, akademika manam-pahaizana manokana momba ny kolontsaina pop Thailandey fa matetika ireo Iakorns miresaka miaramila ireo no vokatry tombontsoa azo avy amin'ny fifandraisana hanomezan'ny miaramila fitaovana (manomboka amin'ny fanampiana ara-bola ka hatramin'ny fampiasain'ny mpilalao fitaovam-piadiana tena izy) ho takalon'ny dokambarotra tsara. Fa tsy idiran'ny miaramila antsehatra mivantana avokoa ireo lakorns ireo, satria natao hamoronan'ny orinasa tantaram-pitiavan-tanindrazana ny vola hanatontosana ireny tantara ireny.
Fa mbola mipoipoitra hatrany ihany koa ny fampiarahana ny fitiavana sy ny tanky amin'ny famerimberenana ireny tantaram-pitiavana ahitana miaramila “Phu Kong Yod Rak”, novokarina hifanaraka amin'ny vanim-potoana taorian'ny fanonganam-panjakana. Saingy natondron'i Chanan:
…Novolavolaina tamin'ny toe-javatra samihafa sy ny toe-draharaha politika na tetikady miafina ny famerenana ny Phu Kong.
Tsy azo ihodivirana amin'ny fijerena lakorn hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana farany ny fihetsiky ny fitondrana ara-miaramila manoloana ny fitantanana. Tamin'ny taona 2014, niteraka resabe ny fampiatoana ny demaokrasia nataon'ny Vaomiera Nasionalin'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana (NCPO). Fikasana hampiroborobo ny idealin'ny [antoko] farany ankavanana amin'ny endrika sakaizan'ny olom-pirenena ny famerenana indray ny “Phu Kong Yod Rak” tamin'ny taona 2015.
Natsangana ho maodelin'ny lehilahy i Pansuphan, lehilahy voalohany ao amin'ny Nam The Iakorn hatramin'ny nisoratany anarana ho ao amin'ny tafika fa tsy volavolaina, manaraka mora sy amim-panetre-tena ny baikon'ny lehibeny, ary miara-miasa amin'ny ekipany mba hanampy ny mponina ambanivohitra. Nofaritana ho mora ho namana i Pan, miaraka amin'ny lantom-peo avy any amin'ny faritra mba hampahazo aina sy hampihomehy ny mpijery.
Nandresy lahatra i Chanan fa ny fanomezana endrika miaramila toy izany no mampitamberina indray ny angano fa mendri-piderana sy manana fikasana tsara ary mampiroborobo ny hevitra hoe:
… Idealin'ny farany ankavanana fa tsy vitan'ny hoe voajanahary ny fahefana miaramila fa mahasoa ny firenena ihany koa
Afisin'ny Taranaky ny Masoandro (Sary tao amin'ny Twitter)
Tamin'ny taona 2016, nisy tantara an-tsehatra miresaka miaramila Koreana Tatsimo antsoina hoe “Descendants of the Sun” na “Taranaky ny Masoandro”, nanan-daza ihany koa tany Thailandy nandritra ny vanim-potoanan'ny korontana politika.”Kisendrasendra tsy misy toy izany!”, hoy i Chanan nihomehy. “Mazava ho azy, mikorontana foana i Tailandy amin'ny fotoana rehetra.”
Manjohy ny fifandraisana misy eo amin'ny Yoo Si-jin, kapitenin'ny vondro-tafika manokana iray ao Korea Atsimo, sy ny Dr. Kang Mo-yeon, tanora mpitsabo iray ny andian-tantara. Na dia nankinina tamin'ny iraka nampidi-doza aza i Yoo Si-Jin, dia nanatanteraka azy ireo ho soa ho an'ny firenena. Farany, nirahina hanao iraka tany amin'ny firenena noforonina ao Uruk izy, tao no nahitany n'i Mo-yeon.
Nahazo fiderana avy amin'ny mpitarika ny fitondrana ara-miaramila, ny jeneraly Prayut Chan-o-cha tenany ny “taranaky ny masoandro”, amin'ny fametrahana ny fanjakazakan'ny miaramila ho fenitra manerantany, araka ny nolazain'i Chanan. Nientanentana i Prayut indray mandeha :
Hitako ao anatin'ity andian-tantara ity ny fitiavan-tanindrazana, ny fanoloran-tena, ny fankatoavana ary ny adidy hikarakara ny vahoaka. Misy fifamaliana eo amin'ireo mpandray anjara, saingy mifankahazo ihany izy ireo amin'ny farany .
Andao hijery azy indray! Raha misy olona te hamorona zavatra toy izany, dia faly aho ny hanohana ara-bola.
Nividy ny andian-dahatsary ny Channel Seven taty aoriana ary namoaka azy amin'ny lohateny hoe “Chi Wit Phuea Cat, Rak Ni Phuea Thoe” (Fiainana ho an'ny Firenena, Ity Fitiavana Anao ity).
Ankehitriny, miresaka momba ny toe-draharaha ara-politika ny “Love Mission” (Pha Ra Kit Rak) izay itakian'ny ny vahoaka Thailandey fifidianana sy ny demaokrasia. Mety milaza ny fanirian'ny fitondrana ara-miaramila hijanona elaela kokoa eo amin'ny fahefana ity santatr'andraikitra ara-pialamboly ity, hoy ny soso-kevitr'i Chanan.
Tantaram-pitiavana noforonina miompana amin'ny miaramila ananan'ny Channel Seven fizaka-manana manokana ho azy ny “Love Missions” tany am-piandohana. Nampifanarahina ho tantara tsangana mampientanentana misy fizarana mifototra amin'ny tantaran'ireo zatovolahy miaramila manana adidy hamotika ny fampihorohoroana iraisampirenena izy io. Mitondra hevitra hoe ilaina ny miaramila mba hiarovana ny olom-pirenena amin'ny habibiana ireo krizy isan-karazany hita ao amin'ny lakorn, toy ny efa nanemoran'i Prayut ny fifidianana amin'ny filazany fa mbola tsy vonona ny firenena.
Angamba ny mampiahiahy kokoa noho ny hafatra politika dia ny anjara toerana be loatra amin'ny famokarana ilay andian-tantara. Miara-manatontosa imbetsaka tamin'ny famitana ny sarimihetsika, miampy fitaovam-piadiana sy fampitaovana ary ny zavatra ilain'ny miaramila ny Tafi-Panjakana Thailandey (RTA) sy ny Polisim-Panjakana Thailandey (RTP). Tsy mahagaga ihany koa raha mamoaka ny andian-tantara ny Channel Seven, satria manana ampahan-drenivola ao anatiny ny RTA.
(ambony) Miramila aseho amin'ny tantara (ambany) miaramila amin'ny tena izy
Rehefa tsy nahomby ny propagandy
Ankoatra ny mahasehatra sosialy sy fialam-boly vaovao mamelana azy, nahoana ny fitondrana miaramila no nandray anjara matetika ao amin'ny tantara mitohy? Ny valiny iray dia mety ho ny lazany manoloana ireo olom-pirenena Thailandey. Saingy nandresy lahatra i Chanan fa mampiseho ny fetran'ny fitondrana miaramila ihany koa ny Iakorns miaramila.
Nanamarika i Chanan fa zara raha nivoatra ny fitaovana propagandin'ny tafika hatramin'ny ady mangatsiaka. Maneho fomba fijery lany andro sy tsy misy ilàna azy intsony amin'ny fampitam-baovao ny fampiasan'ny miaramila hatry ny ela ny lakorn ho fitaovana politika, nanazava i Chanan:
Mazava ho azy fa resaka lazan'ny tantara izy ity, fa zavatra hafa dia tsy hainy ny mampiasa fomba hafa.
Tsy hain'ny tafika ihany koa ny manapoka ny fotokevitra politika ankavanana mba ho zakan'ny vavonin'ny vahoaka ilay izy. Mitopatopa lavitry ny zava-misy ny tantara tsangana, ka mahatonga ny mpijery tsy afa-mividy azy hankany amin'ny nofinofiny, hoy i Chanan:
Notontosaina tsy tamin'ny fitandremana tsara ny antsipirian-javatra sy tsy tamin'ny fomba matihanina ny lakorn notontosain'ny tafika. Tahaka ny nosoratana hamerina ny idealin'ny farany ankavanana ireo mpandray anjara. Iza no hitelina izany?
Araka ny hevitr'i Chanan, manompa ny faharanitan-tsain'ny vahoaka Thailandey ny fanehoana endrika tafahoana ny fanjakazakan'ny miaramila ao amin'ny lakorns:
Jamban'ny nofinofiny manokana ry zareo, hany ka heveriny fa handresy lahatra ny olona hino fa tena misy ireo miaramila tsara sy tonga lafatra ny fanehoana an-tsehatra ajoron-dry zareo ao anaty tantara tsangana. Famitahan-tena ny mieritreritra fa ampy izany hanamaivana ny alahelon'ny vahoaka sy ny fahadisoam-panantenany amin'ny miaramila amin'ny tontolo tena iainana.
Hitondra mankany amin'ny fianjerany ihany, araka ny faminanian'i Chanan, ny tsy fananan'ny tafika fahaiza-manao amin'ny fampahalalam-baovao maoderina sy ny fahatakarana ny vahoaka Thailandey. Milaza izy fa tsy afa-mizaka afa-tsy ny fandosirana ny olom-pirenena, rehefa miatrika ny zava-misy amin'ny fahitana fitondrana ara-miaramila:
Raha mikiry amin'ny famitahan-tenany ny tafika mieritreritra fa afaka mifehy ny eritreritry ny tsirairay izy ireo, mamerimberina anganongano iray, ary mampihatra fomba fanao mitovy, sady mitsipaka ny zava-misy sy manolo izany amin'ny nofinofiny, rahoviana izy ireo…no hanetsika ny firenena ho any amin'ny fandrosoana?